I-AquaSlide | Umvelisi wesilayidi samanzi-isakhiwo sokudlala - aquaslide.fr
(+ 33) 960_351 830 (iindleko zomnxeba zasekhaya)
(+ 33) 633_263 910 (UWhatsApp)
Inqwelo yam yokuthenga
Incwadana Iinkcukacha zoqhagamshelwano locaphulo olugobileyo Izibonelelo ezizodwa ukwabelana Iincwadana
Inkonzo yomthengi Inkampani Ukuzibandakanya kwethu Uyilo lweofisiYiba ngumhambisi Ulawulo lokulandela umkhondo ukunikezelwa Indawo yokushicilela Recrutement Idatha yakho Caphula Contact us
IINDABA kunye ne-CONCEPT SLIDE
UBUHLE BABUCALA KWAKUPHI Amanzi olwandle Umda wobunewunewu kunye netekhnoloji. Le ndawo yokukhempisha inikezela ngento ebalulekileyo xa intle kakhulu Ukutshaya emanzini yenza indawo yayo phakathi kweeflegi zenkqubo entle. Qalisa kwindalo iphela yeAquaSlide kwaye ufumane olona luhlu lugqibeleleyo lwezixhobo zasemanzini kunye nemidlalo emnandi.
-Fumanisa uluhlu olubanzi lwe Ukutshaya emanzini kwaye ucele ikhathalogu yethu.
Isilayidi samanzi epaki
IMILINGANISELO NEMILINGANISELO yoku Ukutshaya Ipaki yamanzi I-AquaSlide. Iprofayile yayo kunye neevolumu zayo ziyinika uphawu olukhethekileyo. Ngaphandle kokulingana, oku Ukutshaya Ipaki yamanzi luphawu lwexesha lalo kwaye ngokuqinisekileyo ngumlinganiso ngokubhekisele kuyilo kunye nokuqonda okuhle.
-Buza uluhlu lwe-AquaSlide kunye nayo slides Ipaki yamanzi kwi-ergonomics namaxesha ...
YODWA NOKUQHELEKILEYO, ukudityaniswa kwe- Isilayidi sephuli Imiceli mngeni yeprojekthi enobuchule bokuyila ubugcisa kwimeko yobungangamsha. Ngobuhle bendalo obungenakuthelekiswa nanto, oku Ukutshaya pool iveza umnqweno wokuphuma kumasiko, kuba ukubaleka amasiko kubalulekile kulonwabo lwabantwana.
-Nyanzelisa utyikityo lwe-AquaSlide kunye nesilayidi semigangatho esemgangathweni evela kumenzi owaziwayo kwihlabathi.
EZAHLUKILEYO, Umdlalo wamanzi ityalwe kwindawo entle, iqhubela ulutsha kwisiphithiphithi esimangalisayo. Inomtsalane kuyilo lwayo, lo mdlalo wamanzi ubalaseleyo wadala uvakalelo kwaye ngokukhawuleza waba yindawo yemidlalo yeqonga yabantwana. Umdibaniso wesilayidi samanzi, i-weir kunye nezixhobo ezingafaniyo. I-flip-flop kwindawo ekhuselekileyo, ubungqina bokugqithisa kwabo, iingcamango zabo zemilingo kunye nokukhohlisa.
- Cela incwadana yakho jeu emanzini Ukwabelana ngolonwabo.
I-RARETE LIMITED, abagqirha bayayikhupha le nto Ulwakhiwo lomdlalo owenziwe ngokwezifiso ukudibanisa okungaqhelekanga. Yenzelwe ulonwabo olungenakuthelekiswa nanto, olu lwakhiwo lokudlala lubalasele ngononophelo olukhulu yiofisi yoyilo, ivumela indibaniselwano emininzi enikezela ngentla kuluhlu ekugqibeleni olunokufikeleleka. Inkqubo emangazayo yetekhnoloji ishiywe ngaloo ndlela kukungakhathali kwabantwana ...
-Ibango lakho umdlalo wexabiso lentengo yenkampu ngemibono emikhulu.
Indawo yokudlala ngaphakathi
UMBUTHO OGQIBELELEYO womoya kunye neendlela ezintsha, iIndawo yokudlala ngaphakathi kukubonakalisa kophuhliso kwisivumelwano esifanelekileyo kunye neemfuno zethu zemfundo. Phonononga ubutyebi bezakhiwo kunye nezinto ezininzi ezinokubakhoindawo yokudlala ngaphakathi zisebenza kakuhle njengoko zinomtsalane. Njengemidlalo yethu yolonwabo, i ulwakhiwo lomdlalo wobuchule luphawulwa ngokukhula kwabantwana abancinci.
INDLELA ENTSHA, zombini ezizodwa kunye ne-Snobbish, le Umlambo wasendle kukukhokelela ekuzonwabiseni nasekuzonwabiseni. Kwindlela yabahambi, i umlambo wasendle ikhosi ejikelezayo kunye engaqhelekanga ikulindile kwindawo esezulwini. Umthandi wokuhlola kunye nelivo, inkuthazo ayisileli kwisithuba esihle se Umlambo onobuqili ou Umlambo ocothayo.
-Fumanisa uvuyo lwasendle, oluhle umlambo!
Indawo yokubhukuda yeXXL
IBANDLA LELIFA LEMVELI le indawo ebanzi echibini yeenkampu zibonisa utyikityo lwenene lwenkqubela phambili engenakuthelekiswa nanto. Yale indawo ebanzi echibini, Makhe sigxile kubude bexesha. Ewe uya kuyidlulisela kwinzala yakho! Ukushiya uphawu lwayo kwilizwe liphela, i-AquaSlide ifikelele encotsheni yokuzahlulela kwindawo ebanzi yokubhukuda.
- Buza igama lokuchazwa indawo yokubhukuda ebiyelweyo I-AquaSlide uyilo lwesisa.
UBUHLE NOKUTHENGA kugqamisa Ifenitshala yephuli. Ifashoni ayisenguye obamba amaphupha kodwa kubalulekile. I-AquaSlide, umdali womoya kunye nentlalo-ntle, ikwenza ufumane ifanitshala echibini ehlaziyiweyo kwincasa yabathengi bakho. Ingqokelela yethu ebalaseleyo yefenitshala yephuli iphendula kwimibono emikhulu.
- Jonga ifanitshala yokudada, isitayile kunye namacandelo obuhle.
Ukusilela ekukhuliseni amaphupha akho okugqwesa, masiqaqambe kwiqela lethu leempawu ezininzi.
Inyathelo eliya phambili kwinto entsha, oyena mlingane wethu mhle uthatha ivumba lenyaniso malunga neminyaka engama-30 yomsebenzi.
I-AquaSlide, iqala ukuphuhlisa uluhlu olubanzi lwezixhobo zokuqubha eYurophu, iAquaSlide isebenza njenge umenzi wesilayidi samanzi, Isilayidi sedama lokuqubha, isilayidi sepaki yamanzi kunye nomdlalo wamanzi.
I-AquaSlide ngoku inesikhundla esiphambili njenge umenzi wesilayidi samachibi eFrance nakwamanye amazwe, iqhubela phambili indawo yokudlala, indawo yokudlala ngaphakathi kodwa nomlambo wasendle, indawo yokubhukuda echibini kunye nefenitshala yephuli.
Iofisi yethu yoyilo ihlengahlengisa isisombululo kwiiprojekthi zakho, ikuxhase kwinqanaba ngalinye lesifundo sakho kwaye ithathe uxanduva lwakho.
Ukwazi kwamaqela ethu ahlukeneyo kuhlangabezana neemfuno kunye nemigangatho ephezulu isilayidi samanzi inxulunyaniswa norhwebo olukhethekileyo.
I-AquaSlide Ikho kuyo yonke indawo kumacandelo, kwiihotele zangaphandle nakwiipaki zamanzi ezinesikhundla sokubhekisa kwityala layo.
Iprojekthi nganye ibonisa ixesha layo ...
... ezethu zizalathiso
I-14 chemin du BOLS - 34150 iPuéchabon (Fransi )
Isilayidi samanzi esivulekileyo
Isilayidi samanzi esihamba ngeendlela ezininzi
Isilayidi samanzi esomoya
Isilayidi samanzi esikhawulezayo
Isilayidi samanzi osapho
Isilayidi samanzi seThubhu
Isilayidi samanzi esimile U
Ukuntywila isilayidi samanzi
Isilayidi samanzi sangaphakathi
Isilayidi ukubeka emhlabeni
Umenzi wesilayidi wentente
Umenzi wesilayidi epaki yamanzi
Umenzi wee tobokgan zehotele
Isilayidi samanzi ividiyo
Ikhithi yesilayidi samanzi
Izinyuko kunye neSango kwikhithi
Isilayidi samadama amancinci
Isilayidi sedama esithe tye
Isilayidi sephuli ityhubhu
Isilayidi sedama lesilayidi
Isilayidi sephuli yevidiyo
Ithoyi encinci yamanzi
Umdlalo wamanzi wabantwana
Into yokudlala yamanzi yeengcali
Ulwakhiwo lwemidlalo yasemanzini
Isakhiwo esincinci samanzi
Iindawo zokudlala zamanzi
Inqanawa yomkhosi wamanzi
Ipaki yamanzi encinci yesikhephe
Gcina ipaki yamanzi yesiqithi
Ipaki yamanzi yespacehip
Ipaki yamanzi yerocket
Ipaki yamanzi eJungle
Ipaki yamanzi engaphantsi kwamanzi
Isilayidi samanzi esincinci
Ividiyo encinci yesilayidi samanzi
Iindawo zokudlala emanzini
Ipaki yejeti yamanzi
Ibala lokudlala elomileyo
Izixhobo zemidlalo yasemanzini
Umenzi wokudlala wamanzi
Umvelisi webala lokudlala emanzini
Umakhi wesakhiwo sokudlala samanzi
Umenzi wesakhiwo samanzi
Umenzi wento yokudlala yamanzi
Umenzi wepaki yamanzi
Isakhiwo sokudlala esincinci
Isakhiwo sokudlala sabantwana
Isakhiwo somdlalo wentsimbi
Ulwakhiwo lomdlalo wePlastiki
Ulwakhiwo lomdlalo weTubular
Ulwakhiwo lwevidiyo ngaphandle
Ulwakhiwo lwemidlalo emininzi
Umxholo womdlalo womdlalo
Inkqubo yokudlala yolwakhiwo
Dlala isakhiwo ngesilayidi
Dlala isakhiwo senkampu
Isakhiwo somdlalo wevidiyo ngesilayidi
Izixhobo zokwakha izixhobo
Dlala umenzi wesakhiwo
Umakhi wesakhiwo somntwana
Umvelisi wolwakhiwo lomdlalo wekampu
Iindawo zokudlala ngaphakathi
Indawo encinci yokudlala ngaphakathi
Indawo yokudlala yabantwana ngaphakathi
Indawo yokudlala yentsimbi
Indawo yokudlala yeplastiki
Indawo yokudlala yeTubular
Indawo yokudlala isilayidi esendlwini
Indawo yemidlalo emininzi
Indawo yokudlala umxholo
Indawo yokudlala ngesilayidi
Ibala lokudlala lekampu
Indawo yokudlala ngeebhola
Indawo yokudlala ividiyo kunye nesilayidi
Izixhobo zokudlala zangaphakathi
Ipaki yokudlala ngaphakathi
Umenzi wepaki yokudlala ngaphakathi
Umenzi wendawo yokudlala ngaphakathi
Indawo yokudlala inkampu
Umenzi webala lokudlala ehotele
Idama lokuqubha elingelolokwenziwa
Ividiyo yomlambo wasendle
Indawo ebanzi yokudada
Indawo yokubhukuda ebiyelweyo
Sihlalo selounge sehotele
Iqonga kunye nenqanaba
Umgangatho wokufunxa umothuko
Isihlalo sokunyusa echibini sabantu abakhubazekileyo
© Copyright 2019 - Aquaslide.fr - Onke amalungelo agciniwe- emizimbeni - tos - I-CGV
IIMVAKALELO EZINTSHA QALISA APHA
I-AquaSlide yindawo yentengiso ekwi-intanethi yeehotele zangaphandle, iilali zeholide kunye namaziko okuzonwabisa. Umzi wehotele, uluntu ... I-AquaSlide ifaneleke ngokufanelekileyo kwiinkampu, iiphuli zokudada zikamasipala, kodwa kunye neeklabhu zezemidlalo, iipaki zamanzi, njl.
Njengezilayidi zethu zokupaka amanzi, izilayidi zokudada kunye nesilayidi samanzi esiko, fumana ukubaluleka kwe imidlalo yamanzi, iindawo zokudlala kunye nezakhiwo zokudlala.
Uluhlu oludumileyo lwandisiwe ukuze kuzuze imilambo yasendle kunye nefenitshala yamachibi okudada ukongeza kwicandelo umenzi wesilayidi samanzi yenzelwe inkampu.
I-AquaSlide kunye ne-ofisi yayo yoyilo, i-ambassador yeprojekthi yakho, iqinisekisa eyona nkonzo / ukuthembeka / ukhuseleko kunye Amaxabiso esilayidi zamanzi esemgangathweni olungileyo.
Fumanisa inkqubo ebalaseleyo ye-Aquaslide, cela ikowuti eyenzelwe wena okanye iodolo kwi-intanethi.
Yonyusa indawo yakho yolonwabo ngokuntywila kungcamlo lwe-aquaslide.fr
Kwaye ufumane icandelo lethu umenzi wesilayidi esiqhelekileyo I-AquaSlide
Indawo isebenzisa ii-cookies. Ngokuqhubeka nokusebenzisa indawo yeAquaSlide okanye ucofe u "Imvumelwano", ugunyazisa ukusetyenziswa kweeKuki, njengoko kubonisiwe yomgaqo-nkqubo